Njenge arhente yedijithali Kwishishini ukusukela ngo1996, sinethuba lokwenza amakhulu eewebhusayithi ezinamashishini kunye nezingenzi nzuzo. Sifunde okuninzi apha endleleni kwaye siyifumene inkqubo yethu ukuya kumatshini oyile kakuhle.
Inkqubo yethu iqala nge Uyilo lwewebhusayithi, esivumela ukuba senze umsebenzi wokuqala wokulungiselela kunye nokukhupha iinkcukacha kunye nomthengi ngaphambi kokuba siye kude kakhulu kwindlela yokucaphula kunye nokuyila.
Ngaphandle kwento yokuba le nkqubo isebenza kakuhle ngokwenene, sisahlangabezana neRFP eyoyikekayo amaxesha ngamaxesha. Ngaba ukhona umntu othanda i-RFPs? Khange ndicinge njalo. Ukanti ziyaqhubeka ukuba yinto eqhelekileyo kwimibutho ekhangela indawo yokuqala xa ifuna iprojekthi yewebhusayithi eyenziweyo.
Nantsi imfihlo: Ii-RFP zeWebhusayithi azisebenzi. Azilunganga kumthengi kwaye azilunganga kwiarhente.
Nali ibali elibonisa le nto ndithetha ngayo. Umbutho kutshanje uze kuthi ufuna uncedo ngewebhusayithi yawo. Babenayo i-RFP edityaniswe kunokubonisa iseti esemgangathweni yeempawu, ezinye izicelo ezizodwa, kunye nezinto eziqhelekileyo zoluhlu lweminqweno (kubandakanya imigangatho elungileyo emidala: "sifuna ukuba iwebhusayithi yethu entsha ibe lula ukuhamba").
Ukuthi ga, kuhle. Nangona kunjalo, sichazile ukuba inkqubo yethu iqala ngeplani yewebhusayithi, eyilelwe ukuba isinike ixesha lokubonisana, ukucwangcisa, kunye nexesha lemephu ngaphambi kokuzibophelela kwixabiso. Bavumile ukubeka i-RFP okwethutyana ecaleni kwaye baqale ngeplani kwaye sakhatywa.
Ngexesha lentlanganiso yethu yokuqala yenkqubo, siye samba kwiinjongo ezithile, sabuza imibuzo, kwaye saxoxa ngemeko zentengiso. Ngexesha lengxoxo yethu, kwacaca ukuba ezinye izinto kwi-RFP bezingasafuneki nje ukuba siphendule eminye yemibuzo yabo kwaye sinike neengcebiso zethu ngokusekwe kwiminyaka yamava.
Sikwabhengeza ezinye izinto ezintsha ezingafakwanga kwi-RFP. Umxhasi wethu wayevuya kakhulu kuba sikwazile “ukwenza ngcono” iimfuno zabo kwaye siqiniseke ukuba sonke sikwelo phepha linye malunga nokuba yayiyintoni na esi sicwangciso.
Ukongeza, sigqibe ukugcina imali yabathengi. Ukuba besicaphule kwixabiso elisekwe kwi-RFP, ngesibe sisekele kwiimfuno ezingalunganga kumbutho. Endaweni yoko, sathetha-thethana nabo ukubonelela ngezinye iindlela ezilunge ngakumbi nezonga imali ngakumbi.
Sibona le meko kaninzi-njalo, yiyo loo nto sizimisele kakhulu kwinkqubo yenkqubo kwaye kutheni singakholelwa kwii-RFP zewebhusayithi.
Nantsi ingxaki esisiseko nge-RFPs-zibhaliwe ngumbutho zicela uncedo, ukanti bazama ukuqikelela kwangaphambili izisombululo ezifanelekileyo. Wazi njani ukuba ufuna iwizard yoqwalaselo lwemveliso? Uqinisekile ukuba ufuna ukufaka indawo yamalungu kuphela? Kutheni ukhethe eli nqaku ngaphezulu kwelo nqaku? Kuyalingana nokuya kwagqirha ukuze ufumane isifo kunye nonyango, kodwa ubuze amayeza athile ngaphambi kokuba undwendwele iofisi yakhe.
Ke ukuba ucwangcisa iprojekthi entsha yewebhusayithi, nceda uzame ukwaphula umkhwa weRFP. Qala ngeencoko kunye nokucwangcisa kunye iarhente yakho (okanye iarhente enokubakho) kwaye uthathe indlela ebukhali ngakumbi kwiprojekthi yakho yewebhusayithi. Uninzi lwexesha uyakufumanisa ukuba uza kufumana iziphumo ezingcono kwaye usenokonga nemali!
Izibonelelo ezi-5 zokongeza i-infographic kwindawo yakho
Ukuxhobisa ishishini lakho kwiiVidiyo zeNgcali
Meyi 14, 2013 kwi-5: 25 PM
Andivumi. Ii-RFPs ayisiyombono yoyikisayo kwiiwebhusayithi, zingumbono ombi kuyo nayiphi na iprojekthi.
Izizathu zezi zichazwe ngasentla. Kodwa Nazi izizathu ezibaluleke kakhulu zokuba kutheni ii-RFP zingasebenzi: bacinga ukuba umthengi sele eyenzile yonke into entsha.
Ukuba unokwenza izinto ezintsha ngaphandle koncedo, ithini ke loo nto ngombono wakho ngoncedo ocinga ukuba ulufuna?
Meyi 15, 2013 kwi-1: 48 PM
Enkosi ngengxelo, uRobby! Ewe ndiyavuma… bendifuna ukunamathela kwinto endiyaziyo 🙂
Meyi 14, 2013 kwi-6: 29 PM
Ndiza kubonelela ngesindululo esisekwe kwi-RFP yewebhusayithi, kodwa iya kufuna utyalo-mali olukhulu kakhulu ngumthengi kuba singathanda ukuba nobudlelwane obuqhubekayo kunomsebenzi weprojekthi.
Meyi 15, 2013 kwi-7: 51 AM
Ditto oko kuthethwe nguRobby.
Meyi 16, 2013 kwi-11: 47 AM
Itshiwo kakuhle. Oku kuyinyani kwiiwebhusayithi… nayo yonke imveliso okanye inkonzo engeyiyo imveliso yorhwebo. Ii-RFPs zizama ukubala izinto (ukuze sizithelekise kwispredishithi) ezichasa ubungakanani. Ngaphandle kokuba ucela iikowuti, yithi, imoto kaloliwe yeentsimbi zentsimbi (kwaye mhlawumbi kungenjalo!), Kuya kufuneka uchonge ababoneleli obathembayo kwaye ubavumele ukuba babe ngabacebisi kwinkqubo. Ngaphandle koko, isiphumo "sijongeka silungile ephepheni," kodwa esingasebenzi kakuhle kwilizwe lokwenyani.
Meyi 16, 2013 kwi-12: 43 PM
Yithande! Enkosi, Chris.
Meyi 16, 2013 kwi-12: 23 PM
Isiphetho: Uninzi lwaBathengi alwazi ngenene ukuba bafuna ntoni, kodwa eyona nto abayaziyo bayayidinga …… ukushumayela ngonaphakade kwiiarhente… ..